Linux Inobatsira Kugadzirira Chikoro Chematambudziko Era | Linux Vakapindwa muropa
La SARS-CoV-2 denda Auya kuzoshandura maitirwo ezvinhu. Kwete chete kuti iwe unofanirwa kutora chinhambwe kure, kupfeka chifukidzo uye kuve nechokwadi chakanaka maoko ekugeza. Uye zvakare, yakasimudzirawo kufona nekuita zvidzidzo zvehurefu. Uye Linux inogona kuita zvakawanda mupfungwa yekupedzisira, ichiita zvikoro zvakawanda kutenderera pasirese zvakagadzirira kudzidza kure.
Muenzaniso wakajeka ndewe Robert Maynord, mudzidzisi akatanga kudzidzisa anopfuura makore makumi maviri apfuura paImmaculate Moyo weMary Chikoro muMonona, Wisconsin. Paakatanga pabasa iri paingova nemakomputa masere chete muchikoro chose uye vese vaive vakagadzirwa neMicrosoft Windows 20. Zvino, nekuda kweshungu uye ruzivo rwake neLinux uye software yemahara, pakave neshanduko yakazara inobata mazera ese, kubva pagiredhi revacheche kusvika kune rechisere.
Mudzidzisi anovimbisa chimwe chinhu chinotozivikanwa, uye ndizvo bhadhara marezinesi yekomputa yega yega kuwana Microsoft system kuwedzera kune marezinesi eesoftware yega yega iwe yaunoda kuisa chaive chinhu chisina musoro. Ndokusaka akafunga kusarudza kuisa Linux pamakomputa ese uye kushandisa yemahara software. Izvi zvinotonyanya kukosha mune zvimwe zvikoro zviri munyika dzine hurombo.
Kune rimwe divi, Robert anoratidzirawo imwe pfungwa inozivikanwa, uye ndiko kuri kuve kwe open source. Izvo zvinovimbisa kuti kana iwe uchida chimwe chinhu chitsva haufanire kunge uine wekunze mupi, ivo vanogona kuita chero zvese mukati.
Kana Covid-19 yatanga, semuenzaniso, iwe wakakwanisa kumisikidza BigBlueButton server kuti isanganise ne MOODLE yevadzidzi vako. Pamusoro pezvo, masisitimu efoni edhijitari aive akabatana kuburikidza neCAT-6A network, pamwe neFreePBX server inomhanya paLinux. Zvese pasina kushandisa kune wechitatu bato masevhisi.
Robert akawana zvakare shandisa Ubuntu pamadhijiti machena machena evadzidzisi, vane madhairekitori neruzivo rwakagovaniswa kubva kuNextcloud. Nekudaro vadzidzisi vanogona kurodha mharidzo nedata rakakosha pazvidzidzo uye kuti zviwanikwe ipapo ipapo.
Kune rimwe divi, mazhinji masevhisi ehurongwa uye masisitimu akange achishandiswa panguva yedenda nevadzidzisi vazhinji anosanganisira kuunganidzwa kwe data revashandisi, izvo zvinotyora Kuvanzika. Chinhu chakakomba kana zvasvika kune vadiki.
SaRobert, varipo zvimwe zvikoro zvakawanda kutenderera pasirese iyo nekuda kwekuvhura sosi, Linux uye mapurojekiti senge Raspberry Pi, vari kukwanisa kupa vadzidzisi uye vadzidzi zviwanikwa izvo neimwe nzira zvaisazogoneka ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Linux Inobatsira Kugadzirira Chikoro chePandemic Era